Maxaa sababay isku shaandheynta wasiirrada dowlad deegaanka Soomaalida? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka MW Mustafe muxumed cumar
Image caption Mustafe Cagjar ayaa loollanka ugu adag kala kulmaya siyaasiyiin aan la dhacsaneyn sida uu wax u wado
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumad Cumar ayaa galinkii hore ee maanta kulan la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirrada, waxaana shirkaas ka soo baxay qodabo dhowr ah.
Kulanka uu saaka madaxweyne Mustafe Cagjar isugu yeeray golaha wasiirrada ayaa kusoo aaday xilli uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya mas'uuliyiinta dowlad deegaanka iyo maamulka federaalka Itoobiya.
Shalay ayaa 2 jeer magaalada Addis Ababa looga yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka, isagoo markii uu dib uga soo laabtayna shirkan la yeeshay xukuumadda gobolka.
Isla xisaabtan mise Cafis: Keebaa la gudboon Deegaanka Soomaalida
Maxay ka wadahadlayaan mucaaradka madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya?
Go'aannadii shirkan kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in isku shaandheyn lagu sameeyay wasiirrada oo oo qaarkood xilalka laga qaaday kuwo kalena laga baddalay jagooyinkii ay horay u hayeen.
Saddex mas'uul oo xilalka laga qaaday waxaa ka mid ah wasiirkii warfaafinta ee dowlad deegaanka Guuleed Kaahin Aw Cali, kaasoo lagu baddalay ku xigeenkiisii oo lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Mowliid.
Qodobadii kale ee kasoo baxay shirkii saaka waxaa ka mid ahaa:
- in tallaabo sharci ah laga qaado dadkii horay dambiyada uga galay deegaanka,
- in dib loo eego xubno ka tirsan wasiirrada oo ka baaqda shirarka golaha isla markaana go'aan laga qaato haddii ay sidaas iska baddali waayaan
Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysay tallaabada uu madaxweyne Mustafe ka qaaday xubnaha wasiirrada, hase ahaatee waxaa loo aaneynayaa culeys siyaasadeed oo ka dhex jira xisbifa haya talada maamulka gobolka.
Maxaa sababay xiisadda siyaasadeed?
Wasiirka cusub ee warfaafinta ayaa BBC-da la hadlay wuxuuna xiisaddaha siyaasadeed ee halkaas ka taagan ku micneeyay mid dabiici ah.
"Mar kasta oo siyaasad laga hadlayo wuu jiraa isku dhac siyaasadeed oo ka dhex jira xisbi walba gudihiisa. Waxaa la isku qabtaa oo lagu kala aragti duwanaan karaa side dadkeenna u fiican", ayuu yiri Cabdullaahi Maxamed Mowliid.
Dad badan waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha deegaanka uu caqabadda ugu badan kala kulmayo siyaasiyiin horay uga tirsanaa xukuumaddii hore, kuwaasoo aan la dhacsaneyn hannaanka uu wax ku wado.